အီး(E)တစ်လုံးပဲ ပြောတတ်သေးတဲ့ အောင်သူနဲ့ပိုးအိအိခန့်တို့ရဲ့ အသဲတုန်းလေး အီးတစ်လုံးကိုယ်တော်(video) - MDY News
ရတနာပုံအသင္းရဲ႕အဓိကတိုက္စစ္မႈးတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ေအာင္သူ နဲ႔ ႐ုပ္ရွင္ ဗီဒီယို႐ုပ္ေဆာင္ ပိုးအိအိခန္႔ တို႔ရဲ႕ သားေလးျဖစ္တဲ့ ကိုးကိုးေလးကို ပရိတ္သတ္ႀကီးလည္း သိၾကမွာပါ။ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးစလုံးက အလိုလိုက္ခ်စ္ျပေနတာမို႔ သားေလးကိုးကိုး ကို ပရိတ္သတ္ႀကီးေတာင္ သဝန္တိုခ်င္စရာပါပဲ။
မၾကာေသးမီက ေအာင္သူကိုယ္တိုင္ေရးစပ္ထားၿပီး မိခင္ပိုးအိအိခန္႔ကိုယ္တိုင္ သီဆိုထားတဲ့ ကိုးကိုးေလးအတြက္ သီခ်င္းေလးက ပရိတ္သတ္အေတာ္အမ်ား သေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္ေစခဲ့ပါတယ္။ပိုးအိအိခန္႔ ကေတာ့ အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈေတြ ရပ္တန္႔ထားၿပီး သားေလးကိုးကိုးနဲ႔ပဲ အခ်ိန္ေတြ ကုန္ဆုံးရင္း ခ်စ္စရာကိုးကိုး ရဲ႕ ပုံရိပ္ေလးေတြကို ပရိတ္သတ္ႀကီးကို မွ်ေဝေပးတတ္ပါတယ္။
ယခုတစ္ခါ မွ်ေဝေပးလာတာကေတာ့ ကိုးကိုးေလးတစ္ေယာက္ မပီကလာေလးနဲ႔ အီး(E)တစ္လုံးပဲ ေျပာတတ္ေသးတဲ့ videoေလးကို မွ်ေဝလာပါတယ္။ေမေမပိုးအိအိခန္႔က A. B. C. Dဆိုၿပီးရင္ အီး ဆိုတဲ့ အသံက်ယ္ႀကီးနဲ႔ ေအာ္လိုက္တဲ့ ကိုးကိုးေလးရဲ႕ ခ်စ္စရာဟန္ပန္ေလးကို ​ပရိတ္သတ္ေတြလည္း ၾကည့္ရႈေပ်ာ္႐ႊင္ေစဖို႔ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
Flower Sky ,Source ; Poe Ei Ei Khant`Facebook
ရတနာပုံအသင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့အောင်သူ နဲ့ ရုပ်ရှင် ဗီဒီယိုရုပ်ဆောင် ပိုးအိအိခန့် တို့ရဲ့ သားလေးဖြစ်တဲ့ ကိုးကိုးလေးကို ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း သိကြမှာပါ။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးစလုံးက အလိုလိုက်ချစ်ပြနေတာမို့ သားလေးကိုးကိုး ကို ပရိတ်သတ်ကြီးတောင် သဝန်တိုချင်စရာပါပဲ။
မကြာသေးမီက အောင်သူကိုယ်တိုင်ရေးစပ်ထားပြီး မိခင်ပိုးအိအိခန့်ကိုယ်တိုင် သီဆိုထားတဲ့ ကိုးကိုးလေးအတွက် သီချင်းလေးက ပရိတ်သတ်အတော်အများ သဘောကျနှစ်ခြိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ပိုးအိအိခန့် ကတော့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ ရပ်တန့်ထားပြီး သားလေးကိုးကိုးနဲ့ပဲ အချိန်တွေ ကုန်ဆုံးရင်း ချစ်စရာကိုးကိုး ရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိတ်သတ်ကြီးကို မျှဝေပေးတတ်ပါတယ်။
ယခုတစ်ခါ မျှဝေပေးလာတာကတော့ ကိုးကိုးလေးတစ်ယောက် မပီကလာလေးနဲ့ အီး(E)တစ်လုံးပဲ ပြောတတ်သေးတဲ့ videoလေးကို မျှဝေလာပါတယ်။မေမေပိုးအိအိခန့်က A. B. C. Dဆိုပြီးရင် အီး ဆိုတဲ့ အသံကျယ်ကြီးနဲ့ အော်လိုက်တဲ့ ကိုးကိုးလေးရဲ့ ချစ်စရာဟန်ပန်လေးကို ပရိတ်သတ်တွေလည်း ကြည့်ရှုပျော်ရွှင်စေဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Flower Sky – Yaung Chi ,Source ; Poe Ei Ei Khant`Facebook